I-Platinform ye-Forex ye-Forex kunye ne-System | Software Forex - FXCC
Unokulindela ukuba omnye wabathengi be-ECN-STP abakhokelayo banikeze nge-recent, cutting edge, iipulatifomu ekufuneka zorhwebo ngazo
kwaye kwiFXCC asizange sidumale. Abaxhasi bethu bangafikelela kwiimarike zeFX kuzo zonke izixhobo ezikhethiweyo; i-mobiles, iipilisi, ii-laptops,
Ii-PC kunye nokusebenzisa iiseva ezikude. Iqabane lethu elikhethiweyo lokufikelela kwiimarike yi-MetaQuotes Software Corporation, i
abadali kunye nabaphuhlisi behlabathi elidumile, ukuphumelela ibhaso kunye nesithandwa esithandwa kakhulu kwiFX platform kukhona, MetaTrader 4.
I-MetaTrader i-4 yinkqutyana yamaphulo adibanyiweyo IMetaQuotes Software Corporation. I-MetaQuotes Software Corp yinkampani yokuphuhlisa i-software eyaqala ukuthengisa kwi-2000. Ukususela ekuqaleni kwayo, inkampani iye yaqulunqa idumela elingenakuqhathaniswa kwaye yafumana impumelelo ebalaseleyo ekuphuhliseni nasekuhambiseni umlambo wamaphulo amashishini amashishini, amashishini kunye nezisombululo kwiindawo zokuthengisa iimarike.
Amanqanaba obunzima kunye nabathengisi bezobugcisa banokukhula ukuze bahambelane nezindlela zabo zokurhweba kunye nekhono, ngokusebenzisa uluhlu olupheleleyo lwezinto kunye neenzuzo ezikhoyo kwiiplati zeMetaTrader, zihlala zingatshintshwe kwishishini. Nangona kunjalo, kubahwebi abatsha nabangenamava, iiplani ziyamangalisa: umsebenzisi onobungane, olula kwaye othe ngqo ukusebenzisa.
Ingaba ungumthengisi wexesha elijongene nokwandisa amandla akho kunye nethuba lokuphumelela, okanye uzicingele ukuba ungumsebenzi wexesha elipheleleyo, ofuna ukusetyenziswa: iseva yangasese yangasese okanye ukusebenzisa iindlela zokuthengisa ze-algorithm ukufikelela kwiimarike ngesivinini sombane, iMetaTrader isisombululo esifanelekileyo kuwe. Ngaphezu koko, ngokusebenzisa iFXCC uqhutyelwa ngqo ngokucwangciswa ngaphandle kokungenelela kwedesksi ukungena, ngelixa ufikelele kwidibanti yabanikezeli bempahla ngokwemveliso yenethiwekhi ye-ECN. Ukuqinisekisa ukuba iingqamaniso ze-interbank kunye nokusabalalisa ozifumanayo zibonakalisa imarike yenyani yeemeko zangoku.
I-FXCC inikezela ngamaphulo alandelayo: I-MetaTrader 4, i-MetaTrader i-4 Imfono, iMetTrader 4 ezininzi kwaye MAM (umphathi weakhawunti ezininzi).
Zama zethu iipulatifomu!
I-MetaTrader Abadayisi be-4 bafikelela enye yezona ziwayo iiplani zokurhweba phambili kwihlabathi. Inokuthenjwa, inamandla kwaye isebenzayo, iqonga liqulethe zonke izixhobo zokurhweba ezifunekayo kunye nezixhobo ukwenzela ukuvumela abahwebi ukuba benze: uphando kunye nokuhlalutya, ukungena kunye nokuphuma kumashishini kunye nokusebenzisa i-software yesithathu yokuthengisa, ii-Advisors Advisors (EAs). Ukuba ukhangele ukuhamba phambili kwesihlwele kunye nee-EA ezithengiswayo, i-MetaTrader iye yafezekisa ulwimi lwayo lwenkqubo - MQL4, ukuvumela abahwebi ukuba bahlele ii-robot zabo zorhwebo ezizenzekelayo.
umxokozelo Ngoku Funda nzulu Isikhokelo somsebenzisi
Ukwahlula uluhlu olubanzi kunazo zonke zee-Forex yorhwebo.
I-MetaTrader i-4 Mobile App icwangciswe ngokugqibeleleyo kwaye igqibezele iqela lokuthengisa kwii-Android kunye ne-iPhone ezixhaswayo zixhobo eziphathekayo. Isicelo esiyingqayizivele sivumela abahwebi ukuba bakhethe kwiikhampani zama-brokerage ezikhuphisana nezoshishino zabahwebi. Inkqubo inika yonke into abahwebi bafuna ukuyenza i-Forex yorhwebo. Kufakwe kwi-platform: iisethi ezipheleleyo, imbali yokurhweba, amashadi asebenzisanayo, uhlalutyo lobugcisa kunye nokukhethwa okubanzi kunamadivayisi eselula asekelwayo.
Abathengi basebenzisa i-MetaTrader 4 Mobile App banomsebenzi onamandla wokuthengisa i-Forex nganoma kunini na naphi apha emhlabeni. Ilayibrari yonke yee-analytics kunye neendlela zokurhweba ziyafumaneka kumadivayisi eselula.
Ukuthengisa ngefowuni kunye neMetaTrader 4
Gqibezela ukulawula kwiakhawunti yokurhweba
Ukuthengiswa kuyo nayiphi na i-24 / 5
Zonke iintlobo zee-oda kunye neendlela zokuqhuba
Iingxoxo zetshukumo zokusebenzisana
Iindidi ze-3 zeetshathi: imivalo, izibane zeJapan kunye nomgca ophukileyo
Iimpawu zexesha le-9: ukusuka ngomzuzu omnye ukuya kwinyanga enye
I-30 yezibonakaliso ezithandwa kakhulu
Izinto ze-23 zokuhlalutya
Iindaba zeemarike zemali
Ingxoxo yeselula yamahala kunye ne-imeyile
YifumaneGoogle Play ngokuba khonaIvenkile yosetyenziso Funda nzulu Isikhokelo somsebenzisi we-Android Isikhokelo somsebenzisi we-iOS
Ukuqaliswa kwi-2006, i-MetaTrader 4 MultiTerminal ngoku liyinxalenye ehloniphekileyo nehlonelweyo ye-MetaTrader 4 Trading Platform. I-MultiTerminal ijoliswe ekulawuleni ngokukodwa kwamakhawunti amaninzi. Eli liziko elixabisekileyo kakhulu kunye neqonga labo balawula imali, okanye abo baphatha i-akhawunti ze-investors kunye nabahwebi abasebenza ngeakhawunti ezininzi ngexesha elifanayo.
I-MT4 MultiTerminal idibanisa ngempumelelo iimveliso ezihamba phambili zemakethe ezidibanisa ukurhweba ngokufanelekileyo kwama-akhawunti amaninzi kunye nokusebenza okukhethekileyo. Iprogram yoqwalaselo ifana neyoMeterTrader 4 Client Terminal. Inkqubo elula kwaye inembile, ukuba nayiphi na umthengisi oqhelekileyo ekusebenziseni i-MetaTrader 4 Client Terminal, unokukwazi ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
I-MetaFX inikeza i-software ye-software ye-software yomthengisi I-MAM (i-Multi Account Manager) kwiimali ze-akhawunti ezilawulwayo zorhwebo. I-MAM ivumela ukuba isebenze nayiphi na i-akhawunti elawulwayo, isebenzisa iindlela zokwabiwa eziyinkimbinkimbi, isebenze kunye nabacebisi ngeeNkcazo kunye nokunye okuninzi. Ezinye zezixhobo kunye neenzuzo ziquka:
I-plugin ye-Side Side idala ukusebenza ngokukhawuleza
Ukuvala okuthe ngqo kwimiyalelo nge-Master Master execution
Ivumela izibonakaliso zorhwebo ukuba zithengiswe kwi-platform ye-MT (imodyuli ehlukeneyo)